Global Voices teny Malagasy · 16 Oktobra 2007
Tantara tamin'ny 16 Oktobra 2007
Kôlômbia : Fampanantenan'ny kandidà ho ben'ny tanàna
Amerika Latina16 Oktobra 2007
Ny mpiblaogy Velvet ao amin'ny PISO TR3S [Espagnôla] dia mitantara ny kandidà ho ben'ny tanàna any Medellina iray, izay mampanantena aterineto malalaka sy maimaim-poana hoan'ny rehetra sy solosaina iray isaky ny ankizy raha izy no voafidy ho ben'ny tanàna. Eduardo Avila
Albania : Miverina mifoka sigara sahady indray
Albania16 Oktobra 2007
Ny mpiblaogy Albanian Blogger dia mitatitra fa tsy misy mpandala sahady intsony ilay lalàna mandrara ny fifohana sigara any Albania vao napetraka tsy ela. Veronica Khokhlova
Afrika Atsimo : Ny Anglisy no tanjona manaraka !
Afrika Atsimo16 Oktobra 2007
Taorian'ny fandresen'i Afrika Atsimo an'i Arzantina tamin'ny lalao manasa-dàlana ho amin'ny fiadiana ny ho tompon-daka eran-tanin'ny taranja baolina lavalava [rugby] dia nanambara ny mpiblaogy Lux Mantambo: « tsy tena nahafa-po, tsy lalao toy ireny no nandrasanay, anefa tafakatra ny ekipa Sprinboks ary namandrika ny toerany amin'ny lalao famaranana. Ny Anglisy...
St. Vincent sy ireo Grenadina : Manompo vahoaka ?
Karaiba16 Oktobra 2007
Manontany tena ny mpiblaogy Abeni raha « mba hitombo fahendrena amin'izay ireo mpanao pôlitika ka hahatsiaro tena ny maha-mpanompon'ny vahoaka azy ireo ? » [Anglisy] raha mitantara ny fialantsinin'ireo Ministra taorian'ireo raharaha roa izay nahitana fanararaotam-pahefana ampahibemaso nataon'izy ireo.
Trinite sy Tôbagô : Ny vesatry ny HIV/SIDA andavan'andro
Ny blaogy Now is Wow [Anglisy] dia mitatitra ny diany tany amin'ny faritra Atsimon'ny nosy Trinite sy ny fihaonany tamin'ny ramatoa voan'ny otrikaretina HIV/SIDA izay miresaka mazava sy am-pahatsorana izay mombamomba ny fiainany andavan'andro. Janine Mendes-Franco
Trinite sy Tôbagô, Dôminika : « Blog Action Day »
Ireo blaogy Haveworld sy Living Dominica [Anglisy] dia manatitra ny anjara birikiny amin'ny Blog Action Day amin'ny fanolorana soso-kevitra izay heveriny fa mety hanampy amin'ny fitadroana sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Janine Mendes-Franco
Pejy manokana momba ilay fanoheran’ny Birmana 2007
Azia Atsinanana16 Oktobra 2007
Tsy dia mahazatra loatra izany hoe ny mpibilaogy no loharano fototra tamin’ny fitantaram-baovao. Ny fihetsiketsehana farany tany Myanmar iny dia tsy ho nahoraka loatra raha tsy teo ireo olona maromaro na tao anatiny na tany ivelan’ny firenena nanao vivery ny ainy mihitsy hanapariaka ny vaovao, ny saripika ary ny rakitsarimiaina...